Lockheed L-1049 Super renyeredzi
mubvunzo Lockheed L-1049 Super renyeredzi
2 makore mwedzi 1 apfuura #141 by PAYSON
Chii zvakavanzika kubhururuka nendege iyi pamusoro 5-6 maminitsi pasina kwakakwana injini kukundikana? Kwete injini chete panguva, asi zvose panguva imwe nguva. Ndagara aiva nzvimbo mumwoyo mangu navo, kunyanya kana mumwe zvachose nezvikepe kuchena, recon mhando (pamwe guru Kukosa radar Disc) richibhururuka pamusoro imba yedu kubva Naval Air Station baba vangu amisa.
2 makore mwedzi 1 apfuura #142 by Rolando
Ndine dambudziko chete uye shamwari dzangu. Pane imwe kwazvo mhinduro: inowanzotorwa renyeredzi (kwete nakisa) vari kubhururuka pasina kukanganisa ...
2 makore mwedzi 1 apfuura #144 by PAYSON
Ndinokutendai mhinduro yako. Ndinoziva zviri nemirayiridzo - kusvikira - ishande, (mukati "verenga-ini) kusapfuudza imwe RPM kushandiswa inotevera zvinokubatai-kure, asi uyo hazviiti .... izvozvo chete inowira pasi; inoda zvose nesimba gara pasi. Zvino zvose I kuita kufunga sei kugoverana Pix nemi vakomana.
Zvakare, ndatenda PAYSON
2 makore mwedzi 1 apfuura #161 by Gh0stRider203
hauna kuzarura cowl ichibhabhamisa?
2 makore mwedzi 1 apfuura #162 by PAYSON
Just vakaedza hayo cowl ichibhabhamisa .... pashure ushamwari-up iye akakwira anononoka 4K, akaita kudzoka kuna chawo. Sere kupinda kutiza, Vacuum gauges vakatanga kuenda pasi mumwe nomumwe. Soooo, pashure maminitsi 8, iye akadonha sebwe. Asi, Hey, ndiyo nhoroondo. Tinotenda kuti Info Zvisinei, ndinozvifarira.
2 makore mwedzi 1 apfuura #165 by Gh0stRider203
Ndiri "shoma" mapoka FB nokuda FSX. Ndinenge kukumbira vachipoterera Yekushandisa Kunyange une kumadhindindi shoma vari nyanzvi achibhururutsa B-17, saka ndichangotaura bvunza navo zvakare The Connie ndiyo inotevera shiri ndiri kuwedzera VA wacho rengarava, kamwe ini kuwana zororo shiri dzedu akabhadhara kure.
Ndine zvakakwana ikozvino kubhadhara kubvisa 767-200ER, iyo inosiya maviri 748Fs maviri 772LRs. 744LCF yedu uye 748s muri dzedu huru Vagadziri mari, kunyange 772LR kana akakodzera payload ndege anouya anogona kuuya ari panzvimbo yezvinotapira Mari yauchatambira elnaz Chaizvoizvo inotevera dzakatsarukana munhu haasi kusvikira August uye chokwadi panguva iyoyo, ndirege zvose shiri Zvakamubatsira elnaz
2 makore mwedzi 1 apfuura #178 by PAYSON
Wow Ghost ... rinonzwika zvakanaka uye kuvonga nokuda hanya. Aaaaah, B-17 raMwari. I Kazhinji akamufambisa mumwe chero mukana zvandinowana. Kana nokusingaperi kuwana mukana kuchovha chete rinozivikanwa "The Aluminum kwidibira", itai. (Kana uine usati) Akanga yakavakwa manheru hondo uye vakaendeswa England. Sezvo mugumo aizofanira nacho, hondo yakapera pamusoro wake kusvika. Saka, harimboshandiswi mune hondo. Zviri kwazvo mukati memba mukati nokunze. walkways All emapuranga uye muswe pfuti trolley sezvinoita kumboshandisa. Tarirai nayo pamutsetse kuona apo zvichava kutenderera. Kana wawana chokufambisa, kutanga mumutsara (Ndakaita uye ndakwanisa ubvise uye nyika iri kusvetuka chigaro chaipo shure mutyairi), uye zvechokwadi kuunza kamera yako zvakanaka.
2 makore mwedzi 1 apfuura #186 by tnig
Kubva README faira nokuda Connie. Tevera izvi uye iwe uchava wakanaka. Haufaniri kuva kugadzirisa Prop kuti zvakakodzera RPM kuti murege kubva panhamo.
(5) Right-baya cheki-chiratidzo simicon kuzodana munhu hwakadzama chinzvimbo hwindo
kuratidza zvinokosha injini uye kutiza readouts.
(7) Engine kukundikana chinowanzoitika kuitika kana injini wakashanda pana
2800 + RPM nokuti yakareba nguva (muchenjerere ichi kunyanya
pashure kutora-kure) kana kana dzomoto kudzora = mberi pa 2400 + RPM. zvichienderana
pamusoro kukwira, injini vangangokundikana mukati kwemaminitsi matatu kana mashanu. Shandisa
Prop nenamo tenzi mhikuriso kana Engine nenamo simicon kuchinja RPM sezvo
vanoenderana kuitika ndege mamiriro (ona kuongorora). Pa
Status Panel, injini zvapano readout anoshandisa zvinotevera ruvara Codes:
chena - OK, hapana ngozi injini kutadza;
shora - kuitika simba marongero achaita kukuvadza kana kuruboshwe yakarebesa
mu configuration ichi (kunyange pashure throttling shure kana nokugadzirisa
RPM izvozvo vacharamba tsvuku kusvikira zvemukati injini kukundikana
Counter ari shure razero (anogona kutora maminitsi mashoma)
dzvuku - chakatanga kuitwa waida - kuderedza throttle uye Prop nenamo.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: tdhelpline
2 makore mwedzi 1 apfuura #187 by PAYSON
tnig .... kuvonga nokuda info, asi mubvunzo mumwe - wakamborwara here izvi? No mhosva, asi ndakaedza uye haana vakakwira yapfuura 1200 ft. Noushamwari-up pamusoro runway. Zvimwe chete ini, asi chete ndine dambudziko ne (35 - 45 ndege kubva munzvimbo ino). Izvozvo zvinosanganisira zvimwe makurusa Boeing, lockheed, kana vokuRussia vane kupa. Ndinofunga ndakasangana machisi rangu uye rakakuya ini. Ndinofunga "muchiso X" ane kupa. Ndinokupa izvozvo go, kana ini vanotadza (Rip), udza mudzimai wangu akanga zvakanaka.
Zvakare, akavonga uye maererano PAYSON
2 makore mwedzi 1 apfuura #188 by Gh0stRider203
anoita izvi Super Connie? Ndive kuva Kutarira pachangu elnaz